21 Zvikonzero Zvinoshamisa Zvekutsiva UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » 21 Zvikonzero Zvinoshamisa Zvekutsiva UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Bahrain Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • LGBTQ • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nhasi aimbova Executive Director veUNWTO kwemakore mazhinji, VaCarlos Vogeler vakapa 21 Zvikonzero Zvakakosha izvo zvinoita kuti zvive zvakakosha kuve neakasiyana UNWTO Sekirariari
Carlos Vogeler, aimbova Executive Director weUNWTO is kujoinha vaviri vekare Secretary-Generals Francesco Frangialli naDr Taleb Rifai, uye Muzvinafundo Geoffrey Lipman World Tourism Network Campaign Yekuzvibata kuona hunhu pane iri kuuya UNWTO Sarudzo.
Nei kusarudzwa kwe HE Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa kubva kuBahrain ndiyo tariro yakakura zvakadaro kune indasitiri yekufambisa yepasirese.
Inotangwa neakavhurika tsamba yakanyorwa naimbova UNWTO Secretary-General
Francesco Frangialli naDr Taleb Rifai, vanotsigirwa neaimbove Munyori Munyori-Mukuru Professor Geoffrey Lipman, zvakare aimbove Executive Director veUNWTO Carlos Vogeler parizvino iri kudawo shanduko muhutungamiriri kuUNWTO Sekretariat uye kutsiva UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili.
21 Zvikonzero nei shanduko dzekukurumidza dzichikurumidza kuUNWTO
1. Kubva 2018, UNWTO yanga yakagara seSangano, isiri kuzadzikisa kugona kwayo nenhengo dzayo, uye ichiita chirongwa chebasa chine zvibudiriro zvishoma mukutarisana nemasimba ane simba eVanyori Vapfuura, Mr. Frangialli uye VaRifai.
2. Uku kusarongeka kwakaringana kuri kukonzerwa nezvikonzero zvitatu zvakakosha: chekutanga, kushaikwa kwehutungamiriri hwekushanya neruzivo kubva kuSG yazvino, Zurab Pololikashvili, izvo zvakakonzera kuti UNWTO ive mutambi wepasirese asingakoshe, panguva iyo zviito zvekutora danho. zvinodiwa. Yechipiri, tsika yekushandira uye kutya iyo Zurab Pololikashvili yakagadzika pakati pevashandi veUNWTO kubvira paakatanga kuita mabasa eSG yeUNWTO. Chechitatu, mhedzisiro yevaviri vapfuura, iyo yakaparadza zvirongwa zvevarume nevakadzi vakanakisa nekuparadza zvinokurudzira kushandira nhengo nekuzvitsiva nemamiriro ekutya uye kuteerera kusingaoneki kune zvemukati zvehutongi tsika uye basa kumutungamiriri. kuchengetedza basa ravo.
3. Takatarisana nemufananidzo wakashata uyu, kukwikwidza kwaHE Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa anobva kuBahrain ishuviro huru kune avo vedu vanotsigira kushanya uye vanokoshesa UNWTO, sezvo hunhu hwake nehunyanzvi hwakasiyana zvakasiyana neizvo zvazvino SG. Ane ruzivo rwakadzama rwechikamu, maneja ane hunyanzvi hwevanhu nemari, uye anoshuvira kugadzirisa zvinonetsa zvemitezo sekutanga, kutanga nezvose zvisina kuitwa kugadzirisa mhedzisiro ine njodzi mukushanya kweCovid- 19.
4. Mumvumo iyi, SG ariko anga achingoita zvisina hunhu mukutungamira kwake, achifarira zvido zvake pane zveSangano.
5. Muenzaniso wakajeka yaive chikumbiro chake kuKanzuru yeKudenga kuti ifambisire mberi musangano weKanzuru yakataurwa, iyo inofanirwa kusarudza SG kusvika Ndira 18, 2021 kuMadrid, apo zuva rayo rekupemberera rinofanira kuve May 2021.
6. Kufambira mberi kwemazuva kwakapfupisa nguva dzekuratidzwa kwemasarudzo ku SG, sezvo zvakatorwa muKanzuru yeGeorgia, zvakangoitika nyika yeSG, isiri nhengo yeKanzuru, muna Gunyana 17, 2020. , kudzikisira iyo nguva yekuratidzwa kwemamaki kusvika Mbudzi 18, 2020 (mwedzi miviri zuva idzva reKanzuru). Kazhinji, makwikwi aya angave akaunzwa kusvika munaKurume 2021. Zviripachena, mamiriro ezvinhu aya anofarira SG yazvino nekudzivirira huwandu hwevachakwikwidza kuita chinzvimbo ichi. Muchokwadi, kukwikwidza kweBahrain chete ndiko kwakakwanisa kusvika nenguva, zvinova zvisina kujairika, nekuti musarudzo dzese dzakapfuura pagara paine mamiriri mazhinji kubva kunyika dzakasiyana.
7. Chikonzero icho SG yakapa Kanzuru mukufunga kwake kufambisira mberi misi yaive yekuita kuti iwirirane neFITUR, pakukumbirwa neHurumende yeSpain, asi mazuva mashoma gare gare Spain yakafunga kufambisa zuva reFITUR kunyatso kumwedzi yaMay nekuda kwekuoma kwekufamba kwevatumwa venyika muna Ndira nekuda kwedenda. Zvisinei, SG yakasarudza kuchengeta zuva raJanuary pasina chikonzero chakanaka.
8.Nerimwewo divi, ino Executive Executive yegore inoona nezve kubvumidza maakaunzi akaongororwa, sekugadzwa mumitemo yeSangano. Izvi zvichave
zvisingaite kuita sezvo akaongororwa maakaundi haazogadzirirwe kusvika munaApril, nekudaro kutyora mirau.
9. Pamusoro pezvo, mamiriro azvino uye anoonekwa munaJanuary wedenda rinozoita kuti zvive zvisingaite kune vazhinji vevatumwa kuenda kuMadrid kunotora chikamu mumusangano wakakosha kudaro, uye vachatofanira kuvimba nekuvapo kweMamishinari uye / kana fomu yakasanganiswa yekutora chikamu chiso nechiso uye online. Musangano, wakakosha seuyu, uyo unodoma SG, unofanirwa kuitwa nezvivimbiso zvese zvekuvimbika kwesarudzo kuita zviri pamutemo, izvo zvisingaite kunge mumamiriro ezvinhu aya.
10. Hapana chikonzero chekufambisira mberi mazuva eKanzuru, kunze kwekushandira zvido zveSG yazvino mukuda kwake kusarudzazve.
11. Panguva yemvumo iyi, misangano yeKanzuru yave miunganidzwa yakawanda nevanhu vachiita zvekutandarira, zvichiganhurira nguva yakapihwa kumisangano nekukurukurirana pamusoro pekufambiswa kwesangano, zvinoreva kuti nhengo dzeKanzuru dzinotamburawo kushandisa basa ravo rekutarisa basa re Secretariat, inozvidavirira kuKanzuru.
12. Kwakawanda kwekufamba kwaSecretary General, kunyanya kubva muna2019 zvichienda mberi, kusanganisira gore redenda ra2020, kwaitika kune dzimwe nyika nhengo dzeKanzuru, panzvimbo pehurongwa hwekufamba hwakadzikama kumatunhu nenyika nenyika zvisinei nekuti vaive nhengo dzeKanzuru kana kwete. Iyo isingazivikanwe chinangwa inoita kunge iri pachena kwazvo kuwana mavhoti, pane kuve nhengo dzemabasa. Asi Sangano rinoumbwa nenyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu uye kwete chete nhengo makumi matatu nenomwe dzeEC dzinosarudza anotevera Secretary-General.
13. Hukama hweUNWTO nemasangano mazhinji epasi rose (WTTC, PATA, WEF, nezvimwewo) mumunda wezvekushanya zvave kupera simba, simba uye kuremekedzwa panguva yemvumo iyi.
14. Sekirinari yakarongeka yakatenderedza hunhu hwevamwe veSG ichiregeredza hunhu uye ruzivo rwevashandi. Vazhinji vanokosha uye vane ruzivo vashandi veSangano vakafanirwa kusiya panguva ino.
15. Nezve maAmerican, Regional Regional Director havana kuzogadzwa mushure mekunge yapfuura yasara muna Zvita 31, 2017. Mutevedzeri Wedunhu Director, anga achiita basa rakanakisa, akasiiwa nemari shoma, uye akachengetwa chinzvimbo chakafanana nemutevedzeri pasina kugadza director, izvo zvinoratidza kushomeka kwekufarira uye kutarisisa kune zvinodikanwa zvemitezo yeAmerica.
16. Director weHuman Resources akasiya Sangano muna 2018 asingabvumirane netsika dzisina kunaka idzo SG yakatanga kuunza mune zvine chekuita nevashandi.
17. The Director of Administration and Finance uye Chief of Information Technology uye Communications, vakasiyawo Sangano muna 2018, vakamhan'arira Zurab Pololikashvili kumatare eInternational Labour Organisation (ILO). UNWTO yakatopa mari inodarika mazana maviri ezviuru euros mukubhadhariswa kwekukuvara kwakabatana nematare edzimhosva, zvinokuvadza izvo, muhuwandu hwakatarwa nematare, hunofanirwa kubhadharwa nenhengo
18. Kushomeka kwekuita uye hutungamiriri hweUNWTO mumamiriro ezvinhu aripo iye zvino ezvinetso zviri kutambirwa nebazi rezvekushanya, nekuda kwedenda, rakashoropodzwa zvakanyanya mumatunhu epasi rese ekushanya, vachibvunza basa reSangano. Kunyangwe nhengo zhinji dzakaratidza kusagadzikana kwavo neazvino manejimendi.
Kubvumwa kwakapihwa neBahrain yeShaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa kwaizomiririra mukadzi wekutanga kutungamira Sangano reSecretariat kubva payakaumbwa makore makumi mashanu apfuura uye zvaizobatsira kumutsiridza sangano nekudzora hunhu hwaro uye hutongi hwenhengo dzaro.
20. Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa, Gurukota razvino rezvetsika uye Antiquities yeHumambo hweBahrain, munhu anoremekedzwa kwazvo munharaunda yepasi rose uye anowana mukurumbira mukuru, kunyanya muUNESCO. Akashanda pamapurojekiti mazhinji epasi rese achibatanidza tsika uye kushanya.
21. Munguva dzino dzakaoma, Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa ane mamiriro akakodzera ekusimudzira Sangano uye kudzoreredza kuvimba kwenharaunda yepasi rose yekushanya.
Zvizhinji pane Kurongeka kweUNWTO Sarudzo Campaign neWTN: wtn.travel/decency/
Rumwe ruzivo nezve World Tourism Network: www.wtn.travel